musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Wellbeing Magazine inoratidzira Ken Kladouris
Pakutanga gore rino, Ken Kladouris akazivisa kuvhurwa kwekosi yake yaitarisirwa kwazvo pamhepo yakanzi "Kuramba Uchibudirira."
Iyo kosi yakagadzirirwa kupa akateedzana ezvidzidzo zvakanangana nekubatsira vanhu kutenderera mukati kuti vawane kugona kwavo kuzere.
Muzvinabhizimusi Ken Kladouris akasarudza kugadzira chipo ichi mushure mekudyara makore mazhinji mukuzvisimudzira, achinzwisisa kubatsira varume nevakadzi kuzvikwidziridza, pfungwa, muviri nemweya. Chikamu cherwendo rwaKen chinosanganisira kudzoka mukunyarara kwenguva refu, nechitatu yake uye yekupedzisira kudzoka uye zvidzidzo zvayakadzidza zvakagovaniswa neMagazini yeWelbeing.
Kudzoka kwakanyarara kwegore negore kwave kuri chiitiko kuburikidza nechiitiko uye Ken anotarisira kuitisa zvinyararire zvinyararire gore rinouya nevadzidzi vechirongwa chake.
"Ichokwadi chavanotaura - rwendo rwekuzviziva rwunowana zvirinani nekudyara kwega kwega mukuita. "Ndiri kutarisira kuudza vamwe zvakadzama nezve kudzoka kwangu kwekupedzisira chinyararire nenhengo dzeChirikadzi Chekubudirira."